Xawaaraha iibsaduhu wuxuu ku sii socdaa daabacaaddii 10aad ee IMEX America
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Xawaaraha iibsaduhu wuxuu ku sii socdaa daabacaaddii 10aad ee IMEX America
Guddoomiyaha IMEX Ray Bloom iyo Maamulaha IMEX Carina Bauer.
In ka badan 3,000 oo iibsadayaal ah ayaa ilaa hadda isu diiwaangeliyey inay ka soo qaybgalaan IMEX America dhammaan bulshada qorsheeyaha-wakaaladaha dhacdooyinka, ururrada, qorsheeyeyaasha shirkadaha, iyo kuwa madaxa bannaan-dhammaantood leh meherad meel ay dhigtaan iyo kuwo badan oo heer sare ah (oo lagu qeexay heerka C, agaasimayaasha, milkiilayaasha/ shuraakada).
Guri cusub, isla wadnaha wadnaha ku shaqeeya
Bandhiggu wuxuu ku saabsan yahay isku xirka iibsadayaasha iyo soo bandhigayaasha si ay u meeleeyaan meherad.
Dhacdadu waxay qayb muhiim ah ka qaadataa soo kabashada ganacsiga muddada-dheer, iyadoo siineysa fursad waqtigeedii ah si loo cabbiro kalsoonida warshadaha iyo rajooyinka kobaca waqtiga-dhabta ah iyadoo lala kulmayo saaxiibbada iyo la-hawlgalayaasha.
Bandhiggu wuxuu ka dhacayaa Mandalay Bay, Nofeembar 9-11 ee Las Vegas waxaana ka horreeya Smart Monday, oo ay ku shaqayso MPI, 8-da Noofembar.
Wakaaladuhu hadda waxay ka yihiin 47% wadarta guud, shirkadaha wax iibsada 22% halka iibsadayaasha ururku ay yihiin 9% iyo iibsadayaasha madaxa banaan 18% (kale - 4%).
“Qalbigeeda, bandhiggu wuxuu ku saabsan yahay isku xirka iibsadayaasha iyo soo bandhigayaasha si ay u meeleeyaan ganacsi - tani waa aasaaska wax walba oo aan sameyno. Waan ku faraxsanahay inaan aragno dalabka noocaas ah ee ka imanaya bulshada dhacdada meheraddu inay dib isugu soo noqoto IMEX America bisha Nofembar. Qaar badan oo ka mid ah warshadaha, bandhiggu wuxuu qarka u saaran yahay inuu qayb muhiim ah ka ciyaaro soo-kabashadooda ganacsi ee muddada-dheer, isagoo siinaya fursad ku habboon si loo qiyaaso kalsoonida warshadaha iyo rajada kobaca waqtiga-dhabta ah iyadoo lala kulmayo saaxiibbadiisa iyo la-hawlgalayaasha aysan arag ku dhawaad ​​laba sano. ” Carina Bauer, Maamulaha Guud Kooxda IMEX, wuxuu ka hadlayaa diiwaangelinta wadista xawaaraha ee bandhigga kaas oo ka dhacaya Mandalay Bay, Nofeembar 9-11 ee Las Vegas waxaana ka horreeya Smart Monday, oo ay ku shaqayso MPI, 8-da November.
Xirfadlayaasha kulanka iyo hawlwadeennada dhacdada waxaa lagu casuumay inay ku biiraan waxa loo soo diro sida dhacdada soo -noqoshada warshadaha ee diiwaangelinta bilaash, sida caadiga ah. Ka -qaybgalayaashu waxay filan karaan waayo -aragnimo show 'badbaado leh laakiin aan madhalays ahayn' oo loogu talagalay inay daboosho baahiyaha ganacsi ee hadda jira. Waxay u saamaxaysaa inay meel dhigaan oo qorsheeyaan meheradda mustaqbalka halka ay ka galayaan barnaamij waxbarasho ballaadhan oo ku saleysan waddooyin cusub iyo kuwa ku hadla oo fahma caqabadaha warshadaha iyo suuragalnimada inay galaan 2022.
Dhinacyada iibsadayaasha, soo -saareyaal caalami ah oo kala duwan ayaa qandaraas ku qaadanaya toddobaadkii toddobaadkii waxayna fidiyaan dhammaan qaybaha warshadaha. Kuwaas waxaa ka mid ah meelaha loo safro Australia, Singapore, Dubai, Italy, Canada, Boston, Atlanta, Argentina, Hawaii, Panama iyo Puerto Rico iyo sidoo kale kooxaha hudheelka Four Seasons, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group iyo Associated Luxury Hotels International.
Carina oo sii wadata: “Wada -hawlgalayaasheenu waxay door muhiim ah ka ciyaareen sidii ay nooga caawin lahaayeen inaan abuurno bandhig toos ah oo ka tarjumaya jawiga ganacsi ee hadda jira laguna beegsanayo baahiyaha bulshada. Waxaan sidoo kale si dhow ula shaqeyneynaa goobteenna cusub - Mandalay Bay - iyo magaalada martigelisa - LVCVA - si loo hubiyo in IMEX America ay la kulanto heerarka ugu sarreeya ee caafimaadka, raaxada iyo amniga. Hadafkayagu waa inaan abuurno bandhig ay ku qotomaan tallaabooyin ammaan oo sugan iyadoo la bixinayo taabashada caadiga ah ee IMEX ee madadaalada, nafta iyo qalbiga oo aan ognahay inay bulshadeennu aad u xiisaynayso hadda. ”
Iyaga oo fiirinaya daabacaaddii 10aad ee IMEX America, Carina iyo Guddoomiyaha IMEX Ray Bloom waxay ka wada hadlayaan baahida suuqa ee kacsan, soo-bandhigaha iyo heerarka dulsaarka iibsadaha, isbeddelada waayo-aragnimada bandhigga iyo waxyaabo kaloo badan-ka daawo “Wadahadalladii Carina” halkan.
IMEX America waxay ka dhacdaa 9 - 11 Noofambar Mandalay Bay ee Las Vegas iyadoo leh Smart Monday, oo ay ku shaqeyneyso MPI, Nofeembar 8. Si aad isugu diiwaangeliso - bilaash - guji halkan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xulashooyinka hoyga iyo ballanta, guji halkan.
eTurboNews ayaa bahwadaag la ah warbaahinta IMEX